လဒါမှမဟုတ်မြေကြီးထက် သာ. ပိုပြီးလော moon မွကွေီးပျေါမှာဂြိုလ်တုလျော့နည်းသည်။ ။ အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးဆိုတဲ့မေးခွန်းကို! razhius သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ဧရိယာလိုအပ်ပါသလား? အဆိုပါ610 ဒီဂရီအတွက်မြေကြီးတပြင်ကနေအချင်းဝက်။ နေရောင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ...
လျှပ်စစ် Nikola Tesla recreated ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း ကို receiver (အနက်ရောင်သေတ္တာနှင့်ယာဉ်မောင်းနောက်ကွယ်မှနှစ်ခုချောင်း) အတွက်လက်ခံသောလျှပ်စစ်တက်စလာအတွက် Nicola တက်စလာ၏လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း၏ရှင်းပြချက်ကိုသိသာထင်ရှားစွာပင် transmitter ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ...
လီကစ်စ်ဆိုတာဘာလဲ ဤသည် Abakan Liquidus ရှိကျောက်တုံးအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်ပုံများပေါ်တွင်အစိုင်အခဲအဆင့်များအားလုံး ၀ အရည်ပျော်မှုလိုင်းဖြစ်သည်။ အလားတူပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်, အယူအဆ solidus ဖြစ်ပါတယ်။ Liquidus အပူချိန် (H.Yoder, 1976 မှ) TL - ...
MDF အတိုကောက်အဖြစ်? ကြှနျတေျာ့ဦးလေး Fedia ရှင်းရှင်းလင်းလင်းငရုတ်ကောင်း MDF အလတ်စားသိပ်သည်းဆ fiberboard (အလတ်စား Density Fiberboard) ကိုဆိုလိုတာပါ။ MDF fiberboards ၏ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးဖှံ့ဖွိုးတိုးတအဖြစ်သညျထ။ အဆိုပါအချက်သည် ...
Imprinting ဆိုတာဘာလဲ? Imprinting (Eng ။ Imprint - အတွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းအပြီး၊ psyche တွင်အလွန်တည်ငြိမ်သောသဲလွန်စများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း) ။ ၎င်းသည်လူကိုအလွန်လျှင်မြန်။ မြဲမြံစွာသွန်သင်သောပုံစံဖြစ်သည်။
မည်သည့်အရာသည်ထွက်ကုန်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်လုပ်သည်ကိုသိသလား။ ရေ၊ ကျပ်ခိုး၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်။ လောင်ကျွမ်းသောထုတ်ကုန်များနှင့်ရေခဲယိုဖိတ်မှု။ အဓိကအားဖြင့်ရေနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုအညစ်အကြေးအဖြစ် - ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ...
အဘယ်သူကိုအားဖြင့်အခါဘက်တီးရီးယားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသလဲ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဘက်တီးရီးယားအနေနဲ့ optical ဏုအောက်တွင်မြင် 1676 နှစျတှငျဒတျချြသဘာဝ Antoni van Leeuwenhoek ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ခေါ်တော်မူ၏ပေါငျးတို့သဏုသတ္တဝါတွေလိုပဲ ...
အဆိုပါအမှတ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထံမှကွဲပြားခြားနားပါသလဲ ထုတ်ကုန်များအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတူတူပင်ထပ်တလဲလဲ operatsiy.Uzkaya အကွာအဝေး၏အလုပ်ခွင်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်အကောင်အထည်ဖော်မှုအားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏နှင့်အတူ, စဉ်ဆက်မပြတ်၏ကြီးမားသောပမာဏနှင့် ...
အဘယ်မှာရှိမြစ် Ik? Ick, Bashkiria နှင့်တတာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ, အ Kamas မြစ်တစ်လက်ဝဲမြစ်လက်တက်များတွင် Big မြစ် ick ။ အရှည် 571 ကီလိုမီတာ, အင်တုံဧရိယာ 18000 km2 ။ ဒါဟာ Bugulma-Bebeley အတွင်းအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ...
မီးသီးနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ပထမဆုံးလာခဲ့သနည်း၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့က "Illich's Bulb" Yablochkov ကောင်းပြီ၊ လူတိုင်းကမီးသီးအကြောင်းသင့်ကိုပြောပြပြီးပြီ။ မီးသီးတစ်လုံး (Lamp, Eulampius) နှင့်အတူလူတစ်သန်းလာသည်။
ဝိညာဏယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲ? + စာနာထောက်ထားရေး + စာနာထောက်ထားရေး + ဘဝခရီး + ရွှင်လန်း + တီထွင်ဖန်တီး + သနားကြင်နာခြင်း + နားလည်မှု + အာရုံစူးစိုက်မှု + ပွားဒါဟာသင်ရှိသည်နှင့်ဘယ်တော့မှ budet.Sm ကြဘူးဘာကိုအခြားသူများနှင့် တွဲဖက်. သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကဖြစ်ပါတယ်။ : ...
ယင်းလိုရင်းအောက်ဆိုဒ်ရရှိရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ClO, ClO2, Cl2O7 ... တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားကဘာလဲ?
ယင်းလိုရင်းအောက်ဆိုဒ်ရရှိရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ClO, ClO2, Cl2O7 ... တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားကဘာလဲ? ငါနိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်အများကြီးပိုကောင်းသလိုဖြစ်ကြရဖို့, သင်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပြောပြပါ။ သငျသညျပျင်း chloro ရသောအခါအခန်းအပူချိန် 3% နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်မှာကြည့်ပါ ...
အဘယ်သို့အပူချိန်မှာရေသုညအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ။ မင်္ဂလာပါ ယေဘူယျအားဖြင့်သာမန်လေထုဖိအားနှင့်မိုက်ခရိုဆိုင်းထိန်းစနစ်ရှိနေခြင်း - crystal nuclei ဖြစ်လျှင်ရေအနည်းငယ်အနုတ်အပူချိန်ဖြင့်စတင်ပုံသွင်းခြင်းကိုလက်ခံသည်။
အဆိုပါတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတာဝန်ခံ၏နိယာမ။ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသောအခါပေါက်ကွဲမှု၏စွမ်းအင်ကိုဗဟို၏ဗဟိုသို့ ဦး တည်သွားပြီးရှေ့သို့တက်သည်။ ဒါခေါ်မွန်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်၊ ၎င်းသည်ယန္တရားဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ဦး isomorphism ကဘာလဲ? homomorphism? (Homo များထံမှ ... နဲ့ဂရိ။ Morphe အသွင်အပြင်, ပုံသဏ္ဍာန်) Homomorphism algebra အတွက်ပထမဦးဆုံးသညျထ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဒေသများနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်သက်သေပြရာ, သင်္ချာနှင့်လောဂျစ်များ၏အယူအဆ, ...
လူသား၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသောသီအိုရီကဘာလဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဆိုလိုသည်မှာ - လူသား၏မူလအစသည်ယခင်ကစဉ်းစားခဲ့ဖူးသကဲ့သို့လူသား၏မူလအစသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်ပါ၊
သူပုန်ကဘယ်သူလဲ ?? သောင်းကျန်းသူများ (သောင်းကျန်းသူများ၊ သောင်းကျန်းသူများ) - အာဏာပိုင်များကိုဆန့်ကျင်သောအရပ်သားပြည်သူ့လက်နက်ကိုင်တပ်များ။ လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံများနှင့်အတိုက်အခံများအကြားတူညီမှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုလက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံများဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ အများအားဖြင့်သောင်းကျန်းသူ ...
ဘယ်ဟာ "ထူးကဲ" လူတစ်ဦးကိုဆိုလိုသည်?
“ ထူးခြားသော” ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ထူးဆန်းသော၊ လူစုလူဝေးနှင့်အရောင်တောက်ပမှုတို့ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်ရှင်းလင်းချက်အဘိဓာန်အားဖြင့်အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပေးသည်။ RANDOM: ထူးချွန်သူ၊ ကရာလမ်းအားဖြင့်ချီးမွမ်းသည်), Non-standard ကိုဆိုလိုသည် ...
“ blued steel” ဟူသောအမည်သည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။ Vorone # 769; steel (oxidation, blackening, blueing) ဆိုသည်မှာကာဗွန် (သို့) အနိမ့်သံမဏိ (သို့) သံသတ္တုစပ်များ၏သံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သံအောက်ဆိုဒ် (Fe3O4 နှင့်အခြားအထပ်) အလွှာ ၁-၁၀ အထူဖြင့်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။
KL ဆွဲပြား -fizika ဥပမာ NC များအတွက်ဘာသာပြန်ဆိုငါ့ကိုသင်ပေး။ ပုံကိုသိနှင့်တန်ဖိုးများမပေးနိုင်ဘာသာပြန်ဆိုဖြေရှင်းရေးပြဿနာ။ အစဉ်မပြတ်ငါရလဒ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲယူနစ်များပြားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအား 36 များအတွက် ...
52 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,312 စက္ကန့်ကျော် Generate ။